China agba Acryli Mirror factory na suppliers | Donghua
Acha Acryli Mirror Ibé akwụkwọ, Agba Ejiri Ejiri Plexiglass Mpempe akwụkwọ
Erite uru ịbụ fechaa, mmetụta, shatter-eguzogide, dị ọnụ ala ma na-inogide karịa iko, anyị acryli mirror akwụkwọs nwere ike ji dị ka onye ọzọ na omenala iko enyo maka ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ. Dị ka ihe niile acrylics, anyịacryli mirror akwụkwọs nwere ike mfe ebipụ, gbapuru, guzobere chepụtara na laser etched. Ngwa enyo anyị nwere n'ụdị dị iche iche, ike na nha, anyị na-enyekwa nhọrọ nhọrọ ịkpụcha.
Aha ngwaahịa Agba Ejiri acryli Plexiglass Sheet, Akara Acryli Mirror Sheets
Agba Amber, ọla edo, ọla edo, ọla kọpa, acha anụnụ anụnụ, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, oroma, ọbara ọbara, ọlaọcha, odo na agba ndị ọzọ.
Nke anyi acryli mirrorIbé akwụkwọ kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ngwa. Enwere otutu ihe eji eme ya, nke kachasi anya bu ire ere / Ebe a na-azuta, ihe ngosi, akara ngosi, nchekwa, ihe ịchọ mma, mmiri, na ọrụ ụgbọ ala, yana ngwa mma na ime ụlọ, okwu ngosi, POP / retail / ụlọ ahịa fixtures, ji achọ na ime imewe na Mee N'onwe Gị ngwa ngwa.
Enyo Plexiglass bụ mpempe akwụkwọ "na-egosipụta". Enwere ọtụtụ ngwa ebeacryli mirror(Plexiglass mirror) na-arụ ọrụ nke ọma. EBUGH intended ya iji dochie mma ngosi nke enyo iko. Nke ahụ kwuru, ị kwesịrị ịtụle mirror plexiglass na ngwa ebe SAFETY bụ isi nchegbu dị ka enyo enyo siri ike ịhapụ - ma mgbe ọ mere, ọ ga-agbaji n'ime nnukwu iberibe nke nwere ike iji aka aka.
Ọ bụ ezie na ntụgharị uche site na 1/8 ″ ma ọ bụ 1/4 ″ enyo na-ele anya nke ọma site na 1-2ft pụọ, na 10-25ft ma ọ bụ karịa, mmetụta "ụlọ na-atọ ọchị" na-eme n'ihi na mpempe akwụkwọ na-agbanwe (ebe iko siri ike). Ogologo ntụgharị uche bụ kpam kpam dabere na FLATNESS nke mgbidi ị na-arịgo na (na nha enyo ahụ).
acryli mirror mpempe akwụkwọ gold
acryli mirror mpempe akwụkwọ ọlaedo
acryli onwe nyagide mirror mpempe akwụkwọ
agba mirror acrylic mpempe akwụkwọ
gold mirror acrylic mpempe akwụkwọ
bilie gold mirror acrylic
onwe nyagide acryli mirror mpempe akwụkwọ